ဆမ်ဆောင်း တီဗွီအား Reset ပြုလုပ်ခြင်း နည်းလမ်းများ | Samsung Support Myanmar
ပငျမစာမကျြနှာ / ကုနျပစ်စညျး အကူအညီနှငျ့ ပံ့ပိုးရေး / How to customise and arrange Apps on Samsung Smart TV?
ဆမ်ဆောင်း တီဗွီအား Reset ပြုလုပ်ခြင်း နည်းလမ်းများ
နောကျဆုံးအပျဒိတျလုပျသညျ့နေ့ : 24.01.2019
Factory Reset ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် Settings များသည် နဂိုမူလ စက်ရုံမှထုတ်လုပ်သည့် အနေထားသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထို Settings များတွင် ပုံရုပ်များနှင့် အသံ Setting များ၊ Channel menu setting (သိမ်းထားသော channel များပါဝင်သည်)၊ နာရီနှင့် အချိန်သတ်မှတ်ထားသည်များနှင့် သင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားသည့် အခြားသော Settings များ ပါဝင်ပါသည်။ ထို့ပြင် သင်သည် သင်၏တီဗီအား ပညာရှင်ပီသစွာချိန်ညှိခဲ့လျှင် စံကိုက်ညီဝန်ဆောင်မှု menu ကတဆင့် မပြုပြင်ခဲ့သော သင်စံကိုက်ညှိထားသည့် setting များ ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ တီဗွီရှိ Settings များမှ တစ်ခု (ဥပမာ ရုပ်ပုံများ သို့မဟုတ် အသံ) အား ရိုးရှင်းစွာ အသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုပါလျင် သင်၏ တီဗွီမှ အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်အား မှီငြမ်း၍ setting တစ်ခုချင်းစီအား ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။ Factory Reset သည် သင်၏ Network Setting များကို မထိခိုက်စေနိုင်ပါ။ Network Setting အား ပြောင်းလဲလိုပါက သီးခြားလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ တီဗွီမော်ဒယ်လ်အလိုက်မြင်တွေ့ရမည့် မျက်နှာပြင်အသိပေးချက်များမတူညီနိုင်သော်လည်း လုပ်ဆောင်မှု အဆင့်ပုံစံတူသည်။
ခုနှစ်နှင့် မော်ဒယ်လ်အလိုက် လုပ်ဆောင်ရမည့် အဆင့်များအား အောက်ပါ ဇယားတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာမော်ဒယ်လ်အလိုက် အဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်မှု အသေးစိတ်ကို အောက်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Menu Path by year
2015 (J Series)
2016 (K Series)
2017 (M Series)
Home> Settings > Support > Self Diagnosis > Reset
2018 (N Series)
၂၀၁၆ မှ ၂၀၁၈ မော်ဒယ်လ်များ - ခြဲ့ရနျနှိပျပါ
1 တီဗွီအားဖွင့်ပြီး ရီမုတ်ကွန်ထရိုး မှ Menu ခလုတ်အား နှိပ်ပါ။
2 အပေါ်အောက်ရွှေ့ရသော ခလုတ်များမှ အောက်သို့ရွှေ့သော ခလုတ်အားနှိပ်ပြီး Support အားရွေးပြီး ရီမုတ်ကွန်ထရိုးမှ Enter ကို နှိပ်ပါ။ ညာဘက်ရှိ menu အား ရရှိရန် ညာဘက်သို့ရွှေ့ပါ။
3 Self Diagnosis အား ရွေးပြီး ရီမုတ်ကွန်ထရိုးမှ Enter ကို နှိပ်ပါ။ Main menu ပျောက်သွားပြီးနောက်တွင် Self Diagnosis menu ပေါ်လာပါမည်။
4 Reset အားရွေးပြီး ရီမုတ်ကွန်ထရိုးမှ Enter ကို နှိပ်ပါ။
5 တီဗွီမှ Security PIN အားတောင်းခံပါက ရီမုတ်ကွန်ထရိုးအားအသုံးပြုပြီး နံပါတ်များကို ရိုက်ထဲ့ပါ။ သင်သည် PIN နံပါတ်ပြောင်းလဲထားခြင်းမရှိပါက default PIN ဖြစ်သော 0000 အားရိုက်ထည့်ပါ။ မှတ်ချက် - PIN ပြောင်းလဲထားပြီး မမှတ်မိပါက နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်များအား မလုပ်ဆောင်နိုင်တော့ပါ။
6 Factory Reset ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် သတိပေးချက် စာမျက်နှာတစ်ခုပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီး Yes အားရွေး၍ ရီမုတ်ကွန်ထရိုးမှ Enter ကို နှိပ်ပါ။ မှတ်ချက် - ယခင်အသုံးပြုထားခဲ့သော နက်ဒ်ဝေါ့ဒ် အချက်အလက်များမှအပ Setting များအားလုံးသည် စက်ရုံမှထုတ်သည့်အခြေနေသို့ရောက်ရှိသွားမည်ဖြစ်သည်။
7 Factory Reset ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း ကြိမ်ဖန်များစွာ တီဗွီ ဖွင့်ခြင်း ပိတ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး Set Up မျက်နှာပြင်တစ်ခု ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။
Application သို့မဟုတ် Smart Features နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပြဿနာများအား ဖြေရှင်းရန် Smart Hub အားအသုံးပြုရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ Network နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပြဿနာများအတွက်မူ Main Menu အောက်မှ Network options တွင် ၀င်ရောက်ချိန်ညှိပါ။
J Series ၂၀၁၅ တီဗွီမော်ဒယ်လ်များ - ခြဲ့ရနျနှိပျပါ
2 အပေါ်အောက်ရွှေ့ရသော ခလုတ်များမှ အောက်သို့ရွှေ့သော ခလုတ်အားနှိပ်ပြီး Support အားရွေးပါ။ ညာဘက်ရှိ menu အား ရရှိရန် ညာဘက်သို့ရွှေ့ပါ။
6 Factory Reset ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် သတိပေးချက် စာမျက်နှာတစ်ခုပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီး Yes အားရွေး၍ ရီမုတ်ကွန်ထရိုးမှ Enter ကို နှိပ်ပါ။ မှတ်ချက်။ ယခင်အသုံးပြုထားခဲ့သော နက်ဒ်ဝေါ့ဒ် အချက်အလက်များမှအပ Setting များအားလုံးသည် စက်ရုံမှထုတ်သည့်အခြေနေသို့ရောက်ရှိသွားမည်ဖြစ်သည်။
H series 2014 TV modelsခြဲ့ရနျနှိပျပါ
Application သို့မဟုတ် Smart Features နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပြဿနာများအား ဖြေရှင်းရန်
Smart Hub အားအသုံးပြုရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ Network နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပြဿနာများအတွက်မူ
Main Menu အောက်မှ Network options တွင် ၀င်ရောက်ချိန်ညှိပါ။
1 တီဗွီအားဖွင့်ပြီး ရီမုတ်ကွန်ထရိုး မှ Exit ခလုတ်အား ၁၂ စက္ကန်းကြာမျှ ဖိနှိပ်ထားပါ။ Stand by မီးအား အနှောင့်အယှက် မဖြစ်အောင်ထားပါ။
2 Factory Reset ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် သတိပေးချက် စာမျက်နှာတစ်ခုပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီး OK အားရွေး၍ ရီမုတ်ကွန်ထရိုးမှ Enter ကို နှိပ်ပါ။
3 Factory Reset ပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့် တီဗွီသည် အလိုလျောက် ပိတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
4 Factory Reset ပြုလုပ်ပြီးနောက် တီဗွီပြန်ဖွင့်ချိန်တွင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် တီဗွီတပ်ဆင်စဉ်ကကဲ့သို့ မျက်နှာပြင်ပေါ်လာမည်။
How do I edit channels numbers on my Smart TV?
How do I remove TV channels from my Smart TV?